SoundCloud waa marxalad garee dhawaaqa online galinaya macaamiisha si ay u gudbiyaan, record, oo horay u bixisaa music. Hadda waxaad si fudud karaa download soundtracks loogu jecel aad isticmaalka naga SaveFrom.net Gargaare!
Si aad u leedahay awood ay ku soo bixi music ka soundcloud.com, aad leedahay inay soo bandhigto SaveFrom.net caawiye. Halkaa marka ay marayso marka ballaarinta la soo bandhigay wax ku ool ah, mid waa bogga uga sii halkaas oo aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo dukumenti dhawaaqa.
Si aad u hesho download a biiro aad u leedahay in ay farta ku dulqabo mouse ee barbaraha oo ku tagayno waxaa hal daqiiqo. Marka waxa la dhigay, waxaad arki doontaa xiriir ah u eg Bolt oo ah orange ag "Dalab" qabsado. Waxaad markaa ugu dambeyntii riix Bolt oo ka soo dejisan on track MP3 ah.
Maalmahan, dhawaaqa daadinta waa aqbalay warkiisiina wuxuu gaadhay in ka badan. Waxaad dhegaysan kartaa daalaa dhacaya dhawaajiyeen daadinta codadka ka podcasts, raadiyaha Internet-ka iyo baraha internet-ka oo sidaas.
Sida caadiga ah, kuwaas oo daadinta codadka uma baahnid inaad u oggolaan in iyaga si gaar ah u soo bixi in aad PC. In in maadaama ay dhici karta, waxa lagugula talinayaa in aad la sameeyo haddii ay dhacdo in aad u baahan tahay music geeyo u isticmaalka? Waad beddeli kartaa adiga oo isticmaalaya si ay u riixaan in codka mp3 ah daadinta dhawaaqa aan caadi ahayn in MP3 Converter - TunesGo.
Tunesgo si toos ah loogu badalo MP3 songs
Tilmaanta waxaa ka codsigan isha ku helo waa si ay u qoraan dhawaaqa burqanayo sida uu u ciyaaraa dhex kaarka codka aad PC ee. Sidaas daadinta sanqadhaas in MP3 Converter kaa caawin kara la gaaro dhawaaqa burqan in MP3 la lahayn oo musiiba ah oo tayo leh dhawaaqa.
Tallaabo 1: Ku rakib iyo tagaasida daadinta dhawaaq si loo MP3 Converter
Si aad u soo bixi codsigan, muhiimad siin xiriir ka hooseeya hit ah. Laga bilaabo in, waxaad u baahan tahay inay soo bandhigto TunesGo by siyoodba rikoorka .exe labo jeer. Gebogebadii, geli interface koowaad by Brøndby codsiga.
Tallaabo 2: Ku bilow in ka badan bedeli daadinta dhawaaq si loo MP3
Tag interface aasaasiga ah, ka dib markii taas oo aad u baahan tahay inay hesho on qabsado in peruses "taariikhqorihii" helay dhul bidix iyo sare ee shaashadda. On barnaamijkaaga, doondoona oo markaas la ciyaari daadinta codka gaar ah in aad rabtid in aad u qoraan.
Qalab Tani awgeed bilaabi doonaan si ay u qoraan dhawaaqa daadinta marka kaarka codka ee aad PC ee uu bilaabo inuu u ciyaaro. Si fudud u siin qabsado isla perusing "taariikhqorihii" hit kale sanqadha daadinta la sameeyo si aynu isugu guubaabinno qalabka rasmi ah inuu ka tago duubo.
TunesGo duwan ka converters kala duwan oo burqan dhawaaq si loo MP3 in in tirtirayaa baahida loo qabo in ay muujiyaan urur aad dhiranaan in dhalid, tusaale ahaan, MP3, tusaale ahaan. Waxaa diiwaanka flash ah daadinta music ee group MP3 ah. Ilaalinta maanka goolka dhamaadka si aad u hesho xogta MP3 la iska fogeeya in aad PC, asal ahaan iyaga xaq-riix oo halkaas ka on qaado "Open in qabanqaabiyaha."
Talooyin: Maxaad samayn kartaa la diiwaan dhawaaqa burqan waraaqaha MP3
Play dhawaaqa burqanayo ku Lugood ama MP3-kaamil ah ciyaaryahan kasta warbaahinta sida iPod iyadoo hadafku yahay in aad u mahad karaa wax kasta oo waqti iyo meel kasta. Waxaad ku bedelan kartaa codka burqanayo in Lugood la mashruucan kaliya ee xunbo Add ay u qabsado Lugood. Kolkaasuu mar kale aad aragto kara meesha dukumentiyada way iyo soo dejinta u MP3 ciyaaryahan warbaahinta iyada oo aan cid kale.
Waa inuusan doorin ee barnaamijyada wax badala qaar ka mid ah si aad Opus Magnum cajiib ah. Haddii ay dhacdo in aad qorsheyneysa inay ringtone ah kartoo by isticmaalka this higaada muusig, adiga oo aan wax badan oo kala ah waxa uu bedeli si gaar ah ee codsigan.
Waxaa nuqul CD isugu. Lugood lagu talinayaa sida nuqul CD free
Wondershare TunesGo ku siinaysaa fursad ah in ay la xaajoodaan warbaahinta ku saabsan qalabka Apple iyo in ay ka guuraan mid ku xiga aan la kulma Lugood aad. Iyadoo codsigan waxtar leh, aad si degdeg ah u diri kartaa tiro balaadhan oo ah waraaqaha aad PC ama si fudud u dhaqaaqo hoos macluumaadkaaga, si aadan u baahan inaad ku adkaysato haddii qalab uu lumo ama la Dhibay.
Maamul dhammaan warbaahinta on iPod, iPhone ama iPad.
Warbaahinta ka iDevices in aad Lugood iyo dib u dhaqaaq.
Ku dar Media ay ka mid yihiin Podcasts iyo Lugood U si darbi adiga oo aan isticmaalka Lugood.
Isbedel Music iyo feature waxaa la samayn karaa galay Apple fuliyo ururada Abaabulaan aad music ka dhigi playlists aad on your iPod, iPad ama iPhone. Waafajinta qalab wax Apple Computer si ay wax. Isdhaafsiga iyo qabashada aad sawiro ku iPhone, iPod, iyo iPad in aad PC waa aasaasiga ah. Demi sawiro dhexeeya iPad ama iPhone iyo PC isticmaalka istaraatijiyad jiitaa-dhibic.
Samee uruuriyaa oo sawir cusub oo aad iPad, iPod iPhone oo si aad ka mid noqon kara sawiro.
Save sawiro aad Phone ee rogtid oo aad PC ama wax adag Dick dhimo in si ay u sahlan in aad dul dhig slide muuqdaan. Si aad lacag la'aan ah ilaa meel dheeraad ah, aad u masixi karaan nuqul ama sawir ka duwan iDevices aad.
Sargaal Sare Dhexdhexaadka ah: Waxaa iska dhigo oo aad u badan halka ilaa xad ah mashruucan inay ku shuban warbixin ka iPhone. Macluumaad SMS ayaa waxaa si gaar ah dhabarka si sahlan ku shuban, qaadashada laga yaabaa toban daqiiqo dhammayn nidaamka, weli ma ciday ku shaqeeyaan.
Wondershare TunesGo waa hab looga cabsado in warbaahinta aad iPhone, iPad, iPod Touch ama macaamilo aan la kulma Lugood unfailingly. Waxaa la oggol yahay in ay isku dayaan in ay la carqalada kala duwan oo ku saabsan waxa tiro oo cayn kasta ah oo ah dukumenti aad xaalkoodu karo, oo aad ka iibsan kartaa ogolaansho buuxda $39.95.
> Resource > Music > Sida loo Download Music ka Soundcloud